Gabadh loo diiday iskuul magaceeda Muslim darteed. | Somaliska
Gabadh 13 sano jir ah ayaa dacwad u gudbisay Maxkamad ka dib markii loo diiday Iskuul magaceeda dartiis. Gabadha ayaa 10kii bishii Juun codsi u gudbisay iskuulka Husbygårdsskolan ee ku yaala Kista, Stockholm, balse maalintii ku xigtay ayaa gabadh Xoghaye u ah iskuul u sheegtay gabadha yar hooyadeed in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn. Ayadoo shaki ku jira gabadha ka wayn tan codsiga loo sameeyay ayay isbuuc ka dib wacday maamulka iskuulka ayadoo iska dhigaysa haweenay Iswiidhish ah oo magaceeda la yiraahdo "Annelie" taas oo iskuulka u rabta wiilkeeda "Johan" "Maamulaha wuu farxay oo waxay nagu dheheen iskuulka boos waa ka badnaan yahay , ee waa inoo xiliga furitaanka" ayadoo maamulka gabadha ku yiri la hadal Xoghayaha iskuulka taas oo ah midii hooyada u sheegtay in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn. Gabadha wayn ayaa wacday Xoghayaha ayadoo wali iska dhigaysa Annelie. "Aad ayay u faraxday, waxay igu tiri iskuulka boos waa ka badnaanyahay oo waaba la balaariyay si arday badan loo qaato". ayaa dacwada lagu yiri. 2 daqiiqo ka dib ayaa hooyada gabadha dhashay ay wacday Xogyaha ayadoo isticmaaleysa magaceeda carabiga ah, waxay waydiisay in iskuulka boos ka badnaanyahay maadaama hore loogu sheegay boos ma leh. Sida dacwada lagu xusay Xoghayaha iskuulka ayaa si caro leh ku tiri hooyada in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn ee ay tijaabiso waqti kale. "Aniga, hooyadey iyo walaashey iga wayn qalad ayaa nagala galay, maxkamada waxaan ka codsaneynaa in ay difaacdo xuquuqdeena" ayaa dacwada lagu yiri. Dacwada ayaa waxaa la socda wadahadalkii ay Xoghayaha, maamulka iyo reerka gabadha yar ay telfoonka ku wada hadleen oo duuban. Xigasho: The Local
Gabadh loo diiday iskuul magaceeda Muslim darteed.
Gabadh 13 sano jir ah ayaa dacwad u gudbisay Maxkamad ka dib markii loo diiday Iskuul magaceeda dartiis.
Gabadha ayaa 10kii bishii Juun codsi u gudbisay iskuulka Husbygårdsskolan ee ku yaala Kista, Stockholm, balse maalintii ku xigtay ayaa gabadh Xoghaye u ah iskuul u sheegtay gabadha yar hooyadeed in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn.
Ayadoo shaki ku jira gabadha ka wayn tan codsiga loo sameeyay ayay isbuuc ka dib wacday maamulka iskuulka ayadoo iska dhigaysa haweenay Iswiidhish ah oo magaceeda la yiraahdo “Annelie” taas oo iskuulka u rabta wiilkeeda “Johan”
“Maamulaha wuu farxay oo waxay nagu dheheen iskuulka boos waa ka badnaan yahay , ee waa inoo xiliga furitaanka” ayadoo maamulka gabadha ku yiri la hadal Xoghayaha iskuulka taas oo ah midii hooyada u sheegtay in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn.
Gabadha wayn ayaa wacday Xoghayaha ayadoo wali iska dhigaysa Annelie.
“Aad ayay u faraxday, waxay igu tiri iskuulka boos waa ka badnaanyahay oo waaba la balaariyay si arday badan loo qaato”. ayaa dacwada lagu yiri.
2 daqiiqo ka dib ayaa hooyada gabadha dhashay ay wacday Xogyaha ayadoo isticmaaleysa magaceeda carabiga ah, waxay waydiisay in iskuulka boos ka badnaanyahay maadaama hore loogu sheegay boos ma leh.
Sida dacwada lagu xusay Xoghayaha iskuulka ayaa si caro leh ku tiri hooyada in uusan iskuulka boos ka badnaaneyn ee ay tijaabiso waqti kale.
“Aniga, hooyadey iyo walaashey iga wayn qalad ayaa nagala galay, maxkamada waxaan ka codsaneynaa in ay difaacdo xuquuqdeena” ayaa dacwada lagu yiri.
Dacwada ayaa waxaa la socda wadahadalkii ay Xoghayaha, maamulka iyo reerka gabadha yar ay telfoonka ku wada hadleen oo duuban.
Qabowga isbuucyo ayuu sii socon karaa